अतिरिक्त राजस्व। थप आय। राजस्व थप स्रोत
कसैले यसलाई पैसा आनन्द छैन भनेर भन्न सक्छ। र सायद उहाँले सही छ। तर तिनीहरूलाई तरिका calmer र nicer, तपाईं सहमत हुनेछन्। सायद, आधारभूत तलब बाहेक, तपाईं एक आवश्यक अतिरिक्त नियमित आय उपहार आफैलाई र प्रियजनहरूलाई बनाउन, अधिक खर्च उठयो गर्न। खाना, चिकित्सा, भुक्तानी - तर जब तिनीहरूले आधारभूत कुराहरू लागि पैसा चाहिन्छ जीवनमा परिस्थिति छन् उपयोगिता बिल को। थप आय प्राप्त गर्न कसरी जानकारीको लागि, हामी यस लेखमा कवर हुनेछ।
scammers को सावधान रहन
बेइमान मान्छे म अतिरिक्त मुद्रा प्रयासको न्यूनतम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ कसरी सजग छन्। र यति painstakingly मानव लोभ मा प्ले, जाल सेट। त्यसैले तपाईं शानदार आय, वा "प्रति दिन $ 50 देखि भद्र अतिरिक्त आय" प्रयासको न्यूनतम संग प्रतिज्ञा विशेष गरी जब, सावधान हुन। यो (किन तिनीहरूले पहिले नै "काम बिना लाखौं" कमाउन यदि गर्नुपर्छ यसलाई विचार,) मात्र मुद्रा को लागि उनलाई बेच इन्टरनेट मा मानिन्छ सफल उद्यमीहरू दुवै पाठ्यक्रम समावेश, र घर मा कलम संकलन गर्न प्रदान गर्दछ।
थप आय को प्रकार
त्यहाँ धेरै छन्, तर हामी एक निश्चित वर्गीकरण ल्याउन प्रयास गर्नेछ।
अफलाइन आय। यो सबै उमेरका लागि विकल्प को एक क्लासिक विधि हो। ठूलो शहर वसोवास काम पाउन सजिलो, तर कारण परिश्रम संग हुनेछ र एउटा सानो सहरमा, तपाईं काम बिना बाँकी हुनेछैन।
अनलाइन आय, वा इन्टरनेटमा थप आय। विश्व वेब सुधार वित्तीय स्थिति को लागि महान अवसर प्रस्तुत, तर तपाईं ठूलो सावधानी, टी तिनीहरूलाई दृष्टिकोण आवश्यक छ।। यो क्षेत्रमा ठगी booming छ।
तपाईं छात्रवृत्ति र पेंशन अतिरिक्त आय बाहेक प्राप्त गर्न एक तरिका देख रहे भने तपाईंले यी विकल्पहरू छन्:
पत्रक को वितरण। यो काम नियमित रूपमा, यो कुनै पनि कौशल आवश्यकता छैन र प्रत्येक दिन को सबै भन्दा भुक्तानी आवश्यक छ।
बच्चा सम्भालना। तपाईं साथ बच्चाहरु संग राम्रो तरिकाले प्राप्त गर्नुभयो भने, काम बिना रहन छैन। विशेष गरी यदि तपाईं एक किंडरगार्टन वा स्कूलमा काम अनुभव छ। तर तपाईं बच्चाहरु, वा वृद्ध मात्र होइन हेर्न सक्नुहुन्छ। एक ठूलो शहर मा, तपाईं खुसीसाथ तपाईं एक भद्र शुल्क लागि हिड्ने कुकुर निर्देशन गर्ने मालिक पाउनुहुनेछ। निस्सन्देह, तपाईंले साथ जनावरहरूलाई राम्रो प्राप्त र ग्राहकहरु पाल्तु जनावर सामना गर्न निश्चित हुनुपर्छ।
रहस्य खरिदार। रोजगारीको यो प्रकार, जो कम्पनीहरु वा मार्केटिङ एजेन्सीहरू ठूलो प्रदान गर्नुहोस्। यो तपाईं, ग्राहक दृश्य द्वारा पसलमा आउने एक निश्चित उत्पादन बारेमा विक्रेता संग कुराकानी र वास्तवमा आगन्तुक सेवाहरूको वास्तविक गुणस्तर मूल्याङ्कन तथ्यलाई मा हुन्छन्। काम को एक परिणाम रूपमा एक लिखित रिपोर्ट कहिलेकाहीं एक सल्लाहकार (मोबाइल फोन वा खेलाडी यो कार्य सामना गर्न सजिलो बनाउन) संग एक रेकर्ड कुराकानी संलग्न गर्न आवश्यक छ पेश गर्नुहोस्। तपाईंको कम्पनी जानकारी उपयोगी र सूचनात्मक पाउनुहुनेछ भने, त्यसपछि तपाईं अर्को परीक्षण को लागि निमन्त्रणा गरिनेछ।
सायद लाग्छ तपाईं छ कि वस्तुहरूको धेरै - एक अतिरिक्त छ आय को स्रोत। उदाहरणका लागि, तपाईं एक वेल्डिंग मिसिन वा तपाईं निर्माण, ठूलो-मात्रा नवीकरण समयमा आवश्यक अर्को उपकरण छ, र अब धूलो भेला निहित। किन यसलाई भाडामा?
तपाईं एक ग्यारेज वा तपाईं पर्छ कि पार्किङ स्थान, तर कुनै कार छ भने, तपाईं आफ्नो वाहन राख्न र परस्पर लाभदायी सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न गर्न कतै भएका एक व्यक्तिलाई कसरी पाउन बारेमा विचार गर्नुपर्छ। र, पाठ्यक्रम, यो निःशुल्क आवास को वितरण समावेश छ। यसबाहेक, यस अतिरिक्त आय तपाईं एक विश्वसनीय नियमित ग्राहकहरु पाउन, विशेष गरी यदि लगभग निष्क्रिय छ।
तपाईं कम्प्युटर राम्रो हो? यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर धेरै को लागि, शब्द "को Windows को स्थापना" अझै पनि डरलाग्दो सुनिन्थ्यो। किन तिनीहरूलाई मदत गर्न र अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त गर्न? तपाईं बिजुली वा पाइपलाइन, उपकरण साइकल वा रूखहरू पनि छाँट्ने मा राम्रो हो भने - आफ्नो ग्राहकहरु तपाईं पर्खिरहेका छन्। तपाईं को लागि सजिलो छ भन्ने कुरा, कसैले एक असम्भव कार्य लाग्न सक्छ। मान्छे अनुग्रह ल्याउन, र तिनीहरूले आर्थिक धन्यवाद हुनेछ।
घर मा स्थिर अतिरिक्त आय - यो एक सपना तर वर्ल्ड वाइड वेब संग एक वास्तविकता हो। 8 17 घण्टा देखि एक मानक रोजगार संग एक व्यक्ति एक भाग समय अफलाइन पाउन गाह्रो छ, तर तपाईं एक कम्प्युटर छ भने तपाईं पनि साँझ वा राति, तपाईंको भोजन ब्रेक समयमा पनि काम गर्न सक्छन्।
सबैभन्दा विश्वसनीय र स्थिर आय अनलाइन स्वतंत्र छ - टाढा काम। भिडियो, फोटो retouching र थप उत्पादन वा साइटहरु भर्ने, सिर्जना मा लोगो, काम चित्रकला, लेख: विशेष आदानप्रदान मा तपाईं कार्यहरू विभिन्न लिन सक्नेछन्। साथै, त्यहाँ आफ्नो आदेश प्रदर्शन वा दिनचर्या कार्यहरू को कार्यान्वयन समन्वय गर्ने व्यक्तिगत सहायक लागि देख उद्यमीहरू र अधिकारी छन्।
freelancing यसको पासो छ। यो तपाईं बहुमूल्य कौशल छ गर्नुपर्ने स्पष्ट छ। पनि प्रतियोगिता को धेरै, उदाहरणका लागि, विशेषज्ञहरु अनुसार छ सही त्रुटिहरू Java-कोड मा इन्टरनेटमा सामान्य विषय वा स्थान विज्ञापन लेख लेख्न इच्छुक भन्दा धेरै कम छ, यहाँ परियोजनाको लागि मूल्य निर्धारण मा एक विशाल फरक छ।
साथै, एक समय दोस्रो जब रूपमा स्वतंत्र भर छैन। ठूलो महत्त्व र्याङ्किङ्ग कलाकार को आदानप्रदान मा, केही शुरुआती लागि कार्यहरू नियुक्त। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा तपाईं कम-भुक्तानी आदेश गर्न, र त्यसपछि मात्र, तपाईं प्रतिक्रिया हुँदा, तपाईं थप गम्भीर परियोजनाहरू Committing गरिनेछ। त्यसपछि तपाईं एक स्थिर काम, अतिरिक्त आय र एक राम्रो प्रतिष्ठा हुनेछ। विकास को लागि अवसर धेरै प्रभावशाली छन् - एक मुख्य रूपमा freelancing गर्न संक्रमण सम्म गतिविधि।
एक्सचेन्जहरू बाहिर र पूर्वभुक्तान बिना काम नगर्नुहोस्। अन्यथा तपाईं कमाएको पैसा कहिल्यै प्राप्त जोखिम चलाउनुहोस्। ग्राहक निरन्तर सहयोग को लागि एक विशेषज्ञ छनौट अघि कम भुक्तानी सानो परीक्षण काम प्रदान गर्दछ, एक सामान्य अभ्यास मानिन्छ। तर तपाईं नि: शुल्क लागि काम गर्ने प्रस्ताव छ भने, यो एक अवसर गार्ड छ। त्यहाँ एक एकदम साधारण ठगी योजना छ: क्रम उदाहरणका लागि, पाठ को एक ठूलो रकम अनुवाद गर्न, राखिएको छ, र तपाईं आफ्नो क्षमता आकलन गर्न, यो भाग अनुवाद गर्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। र यति सबैलाई आदेश प्राप्त गर्दैन। फलस्वरूप, ग्राहक समाप्त काम, त्यसैले जो कोहीले र चयन गरिएको छैन कलाकार प्राप्त गर्दछ।
पक्कै पनि, freelancing विनिमय आफ्नो आय को एक प्रतिशत लिन, तर तिनीहरूले आफ्नो चासो सुरक्षा: ग्राहक काम भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने थाहा छ, र एक विवाद मध्यस्थता को घटना मा सही छ जो निर्धारण गर्छ।
होइन, हामी तपाईंलाई (यो पनि अतिरिक्त पैसा प्राप्त गर्न धेरै वास्तविक तरिका हो हुनत) मुद्रा को लागि कसैले हटाउन सुझाव छैन। यसको अलमारी र मेजानाइन साथ ध्यान दिएर हिंड्न र तपाईं आवश्यक छैन भनेर कुराहरू पाउन, तर तिनीहरूले बेच्न सक्छौं। यो मात्र होइन वस्त्र, तर पनि पुरानो प्रविधि, बोट, पुस्तकहरू र पनि सोभियत खिलौने र पोस्टकार्ड हुन सक्छ।
उच्च गुणस्तरीय फोटो बनाउन र इन्टरनेट सन्देश बोर्डहरू, सामाजिक सञ्जाल मा विषयगत समूहहरूमा तिनीहरूलाई ठाँउ। यो मात्र ठूलो "फ्लिया बजार", "बजार", तर थप साँघुरो चासो समूह छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले बेच्न चाहनुहुन्छ भने साइकल हेलमेट, साइकलको उत्साही को समुदाय मा एक नजर। नियम, त्यहाँ "किन्नुहोस" खण्ड छ।
को पर्याप्त मूल्य निर्धारण गर्न समान प्रस्ताव हेर्नुहोस्। तपाईं खरीदार कारोबार गरिनेछ भने मूल्य कम गर्न इच्छुक छन् कति बारेमा सोच्नुहोस्।
एक गम्भीर दृष्टिकोण
यो पनि आफ्नो सामान बिक्री, अचम्मको छ, तर, तपाईं, अतिरिक्त आय प्राप्त आफ्नो पैसा गुमाउन, को ठगी गर्ने चंगुल र सट्टा मा प्राप्त गर्न सक्छन्। भयो लोकप्रिय कथित पिन-कोड सम्म, यो बारेमा सबै जानकारी elicit आफ्नो बैंक कार्ड मा एक अग्रिम भुक्तानी र साथ गर्न प्रस्ताव गर्ने संभावित खरीदारों देखि भनिएको छ। धेरै रूपमा यसलाई भनेर कुरा बिना कुनै हिचकिचाहट खाता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै डाटा लिन अपरिचित बताउन मनाउन धेरै गर्न निरर्थक लाग्न सक्छ। त्यसैले जब तपाईं छैन कुरा हो, यसको आकार, राज्य रुचि हो, र तुरुन्तै चाँडै भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ र - सबै को सबै भन्दा, यो Cheats।
गैर-गंभीर खरीदार खबरदार। धेरै मानिसहरू एक अग्रिम भुक्तानी माग्दै जोगिन र वितरण मा नगद द्वारा सामान पठाउन। यो एकदम उचित छ, तर खरीदार पार्सल लिन छैन भने, यो तपाईं आउनेछ, र तपाईं फिर्ता र निस्कने ढुवानी लागत भुक्तानी गर्नेछ। त्यसैले खरीदार मनोवृत्ति पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्: उहाँले यस्तो कारोबार नगर्न गर्न छ, कुरा लिन्छ कि निश्चित छैन भने।
यदि तपाईं राम्रो तस्वीर थाहा मनपर्ने शौक र प्राप्त अतिरिक्त आय, पर्याय हुन सक्छ। आफ्नो तस्वीर हेर्न, उत्कृष्ट चयन गर्नुहोस् र microstock तिनीहरूलाई बिक्री सुरु गर्नुहोस्। स्पष्ट देखाउँदछ तस्वीर, कि नोट एक मानिसको अनुहार, तपाईं त inanimate वस्तुहरु, जनावर गर्न सीमा सुरु गर्न, र यति मा, एक मोडेल जारी गर्न आवश्यक छ। डी
बजार को आवश्यकता विचार गर्नुहोस्। फल र तरकारी, खाली, जाडो - - मौसमी गहने र हिउँ छोपेको परिदृश्य धेरै लोकप्रिय गर्मी मा भोजन को सुन्दर तस्वीर हो। वास्तु आकर्षण को उच्च गुणस्तरीय तस्बिर पनि पर्यटन साइटहरु को मालिक माग।
साथै, केही microstock मात्र फोटो, तर पनि भेक्टर ग्राफिक्स छैन बेच्न, त्यसैले तपाईं कसरी आकर्षित गर्न थाहा छ भने, घरमा अतिरिक्त आय कमाउन यो प्रतिभा प्रयोग गर्नुहोस्। बटन, प्रतीक, बेलुन, ब्याज "छुट", "बिक्री" आदि ...: यहाँ, एउटै नियम वेबसाइट डिजाइन को लागि पनि एकदम लोकप्रिय तत्व तस्बिरहरू लागि रूपमा लागू, तर
schoolchildren वा विद्यार्थीहरूको रेखाचित्र बनाउन, वा निजी पाठ दिन: उदाहरणका लागि, तपाईं राम्रो गुण हो भने, त्यसपछि तपाईं अतिरिक्त आय प्राप्त गर्न दुई तरिकाहरू छन्। अंग्रेजी, संगीत, र अन्य स्कूल विषयहरू - सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्रहरु र ओरिगेमी सिलाइ बुनाइ सुन्दर, वा गुना पनि क्षमता, पनि, शैक्षिक सेवा रूपमा बेच्न सक्छौं। पढाउने अफलाइन र अनलाइन रोजगार क्षेत्र र चालू गर्न सकिन्छ। सबै पछि, तपाईं घरमा विद्यार्थी सिकाउन सक्छन्, तर तपाईं रूसी पाठ अमेरिकी विद्यार्थीहरूको दिन स्काइप कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं प्रेम र थाहा राम्रो व्यवसाय छ भने, आफ्नो ज्ञान व्यवस्थित गर्न तिनीहरूले neophyte लागि रूपमा उपयोगी छन् भनेर, प्रयास पुस्तक वा भिडियो पाठ्यक्रम को रूप मा उनलाई प्रस्तुत - .. अर्थात्, जानकारी उत्पादनहरु र अनलाइन बढाउँछ। सायद यो एउटा पूर्ण-fledged प्रशिक्षक र विशेषज्ञ रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गर्न।
तथापि, सामग्रीको गुणस्तर लागि बाहिर हेर्नुहोस्। नेटवर्क मा अवस्थित सामाग्री को सजिलो reprinting विफलता गर्न बर्बाद छ। मान्छे साँच्चै उपयोगी उत्पादन दिनुहोस्।
अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त गर्न अन्य तरिका - यो बिक्री को लागि शिल्प। बुनाई कढाई गुडिया, आभूषण - हस्तनिर्मित सधैं अत्यधिक मूल्यवान। त्यसपछि तपाईं तरिका फ्लिया बजार भने - तपाईं मित्र विक्रेता छन् भने, तपाईंले आफ्नो सामान यो प्रदर्शन मा संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, रचनात्मकता बढाउन सामाजिक सञ्जाल मा आफ्नो समुदाय सिर्जना गर्न र परिणाम इन्टरनेट सन्देश बोर्डहरू विज्ञापन। पनि आदेश काम सोच्न - यो एक बिट जीवनमा फैंसी को नि: शुल्क उडान को embodiment भन्दा बढी जटिल, तर के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं खरीदार हुनेछ ठ्याक्कै।
तर आय थप स्रोतहरू मात्र कुरा साँच्चै, रोचक मूल र प्राण गरिएका बन्न सक्ने भूल छैन। अक्सर, पनि पूर्ण कार्यान्वयन, परिष्कृत हस्तनिर्मित यसको विशेषताहरू बिना masterpieces कार्यान्वयन मा सरल, तर गैर-तुच्छ काम केही दिन भित्र टाढा जाने बेला, एक नयाँ मालिक को लागि प्रतीक्षा धूलो भेला हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अन्वेषण गर्नुहोस्। त्यहाँ hendmeyd बेच एक ठूलो विदेशी वेबसाइट छ र यसको लागि मूल्यहरु घरेलू भन्दा धेरै उच्च छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र भुक्तानी रसिद को नियम बुझ्न छन्।
जहाँ मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, क्रास्नायार्स्क डलर लागि लाभदायक विनिमय rubles
प्रक्रिया को लागि आवश्यक कागजात, आदेश र विवरण: जब निवास स्थान परिवर्तन पेन्सन कसरी स्थानान्तरण गर्न
कसरी पैसा बर्बाद रोक्न?
कसरी आफ्नो फोन ब्यालेन्स संग जाँच गर्न? मेगाफन विभिन्न क्षमताहरु संग ग्राहकहरु प्रदान
आवास सुधार गर्न प्रत्यक्ष मातृ राजधानी
गराउनुहुन्छ, उपचार: आफ्नो आँखा अघि झिलमिलाना गुजर
महिलाहरु मा रात मा स्वेटर: कारणहरु, उपचार
इरान र modernity को इतिहास। फारसी सौन्दर्य आफैले थाहा
किन म मिठाई चाहनुहुन्छ
स्लेट पारदर्शी पीवीसी रोल, लहर प्रबलित: निर्माण मा विशेष प्रयोग
तालिका मा शिष्टाचार।
उत्पादन कम्पनी Huter: गृह लागि बिजुली। ग्राहक समीक्षा
थायरयड ग्रंथि, लक्षण र निदान मा नोड्स